“Laacib dhan ayaa NOLOL iyo GEERI lagu la’yahay markaasaa adigana….”.- Ronaldo oo si Xun loo Dhaleeceeyay kaddib markii….!!! – Gool FM
(Europe) 23 Jan 2019. Laacibka ugu qaalisan taariikhda kooxda Cardiff City Emiliano Sala 15-milyan oo bound ayaa la la waayay Saacad uun kaddib markii ay Isniintii ka soo duuleen Garoonka Nantes ee dalka Faransiiska iyadoona loo maleenayo inuu Geeriyooday isaga iyo intii Safarka ku wehlisay kaddib markii Diyaarada ay saarnaayeen lagu waayay English Channel Biyaha kala sooca Koonfurta England iyo Koonfurta Faransiiska.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa la filayay inuu isla galabta tababarka la bilaabo kooxdiisa balse weli laguma hayo Nolol iyo Geeri inkastoo saadaashu u badan tahay inay dhammaan geeriyoodeen isaga iyo inta diyaarada la saarneyd.
Cristiano Ronaldo ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay Sawir uu dhoola caddeynayo isagoo muujinaya inuu safar ka soo yahay Madrid halkaa oo lagu soo Maxkamadeeyay kaddib eedeyntiisa Canshuur lunsiga.
Wariyaha Caanka ah ee Gary Lineker iyo dad kale ayaa Baraha Blushada ku soo weeraray xiddiga reer Portugal iyagoona soo jeediyay in Laacib dhan lagu la’yahay Nolol iyo Geeri isna uu diyaaradiisa Raaxada sawir isaga qaadayo.
“Ma ahan maalinka aad waxaan oo kale soo Tweet-gareyn lahayd, dhabtii maaha,” Garry ayaa sidaa yiri:
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Sevilla Vs Barcelona
DEG DEG: Chelsea oo Gacanta ku soo dhigtay Gonzalo Higuain......(Lambarkee loo Xiray)+SAWIRRO